COVID-19တတိယလှိုင်းကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစ… – PVTV Myanmar
COVID-19တတိယလှိုင်းကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစ…
·7months ago ·28 Comments
COVID-19တတိယလှိုင်းကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရက (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်း
ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းရေးအရာရှိ Mr.Tom Andrew က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝင်ငွေရင်းမြစ်တွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့နဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီး လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ ထောက်ပံ့ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာယူကေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အပတ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၇/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်း တွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 8.8K Share – 948
2021-07-08 at 8:24 PM
2021-07-08 at 8:26 PM
U Zaw Htun says:
2021-07-08 at 8:37 PM
2021-07-08 at 9:05 PM
တောင်ငူ အခြေခံဆေး ပါရာတောင်ဝယ်ရခက်နေပြီ ဆေးရုံရှေ့ဆိုင်လောက်သာဖွင့် မြို့ထဲဘယ်ဆေးဆိုင်မှမရှိအကုန်ပိတ်
2021-07-08 at 9:30 PM
Naung Gyi says:
2021-07-08 at 10:05 PM
2021-07-08 at 10:06 PM
အမျိုးသားညီညွှတ်ရေး အစိုးရ. NUG
ဉီးရည်မွန် ၏ မခင်ကြီးဆုံးသွားရတာ
Good news.Help Myanmar. MAY GOD BLESS YOU NUG.
Daw THae says:
2021-07-08 at 11:58 PM
ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမွာလဲ လက္နက္ရေအာင္မလုပ္ေပးနိုင္ရင္ဘာလုပ္မွာလဲ ျပည္သူက လကာတက္တက္ေသေပးေနရသာ
၂သိန္းေပါ နိုင္ေအာင္တိုက္နိုင္ပါတယ္ အေရးျကီသာကလက္နက္လိုခ်င္တယ္NUGစို့ရဘယ္ေတာလုပ္ေပးနိုင္မွာလဲ
2021-07-09 at 1:03 AM
Ma Pai says:
2021-07-09 at 1:11 AM
2021-07-09 at 2:18 AM
Thank you so much for news
2021-07-09 at 2:26 AM
ကလေးမြို့ မှာ ကိုဗစ် ကာကွယ် ဆေး ထိုး ပြီးတဲ့ သူတွေ သေကြတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား
လူတွေ ကို သေဆေးထိုး သတ် နေ ကြ တာလား
တော် တော် ရက် စက် ယုတ်မာ ကြတယ် နော်
2021-07-09 at 2:49 AM
2021-07-09 at 6:55 AM
Maung Maung Aye says:
2021-07-09 at 7:42 AM
အမျိုသားညီညွန်​ရေအစိုရ NuG ကို​ထောင်ခံကျိုဆိုပါသည်
Phyu Ma says:
2021-07-09 at 12:56 PM
Daw Aye Aye Than says:
2021-07-09 at 1:59 PM
2021-07-09 at 5:13 PM
Han Thar Thweay says:
2021-07-09 at 11:06 PM
2021-07-10 at 10:28 PM
စကစ EPCရဲ့ မီတာအခွန်တွေအတင်းလိုက်တောင်းနေပါတယ်
2021-07-13 at 6:41 PM
Bohe Mike UM says:
2021-07-13 at 8:53 PM
2021-07-13 at 11:22 PM
ဒေါက်တာဖြိုးသီဟခံစားရေးဖွဲ့တဲ့ “ဘဝမှာ ရင်အနာရဆုံးအချိန်” အက်ဆေးကို နွေဦးကိုကိုက …